ရေနွေးကြမ်း အလွန်အကျွံသောက်တာ အန္တရာယ်ရှိသလား ??? – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
Catechin လို့ခေါ်တဲ့ antioxidant ကျေးဇူးကြောင့် ရေနွေးကြမ်းက ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး တစ်ပုံတစ်ခေါင်း ပိုမိုရရှိစေတယ်လို့ သုတေသနတစ်ခုက ဖော်ပြထား ပါတယ်။ မှတ်ဥာဏ် ပိုမိုကောင်းမွန်စေမှုကစ ကင်ဆာ ကာကွယ်ပေးခြင်း အထိပါ အားလုံး ဆက်နွယ်နေပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ လက်ဖက်ခြောက်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများအကြောင်းလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ကြားသိရပါတယ်။ ယူကေနိုင်ငံမှာ ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး အွန်လိုင်းမှာမှာ ယူတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် တရုတ်လက်ဖက်ခြောက် တစ်နေ့ (၃) ခွက်သောက် ပြီးနောက် အသည်းဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဆေးရုံရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရေနွေးကြမ်း တစ်နေ့ (၃) ခွက်က အရမ်းများ လွန်းနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် လက်ဖက်ခြောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာတွေက လိုအပ်သည့်ထက် ပိုသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးဆိုင်ဈေးမှာ ရောင်းတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျ ဖျော်ရည်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းက အသည်းကို ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာလည်း ရှိပါတယ်။
လက်ဖက်ခြောက်မှာပါတဲ့ tannins ခေါ်သဘာဝဆိုးဆေးက သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေတယ်လို့ အာဟာရဆိုင်ရာ ပါရဂူ Mike Roussell, Ph.D က ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ပဲ၊ ကြက်ဥ သို့မဟုတ် နို့ဖြင့် ပြုလုပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစတဲ့ အဓိကအားဖြည့်ပေးတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကနေ သံဓာတ်ရရှိဖို့ ပိုနည်းနိုင်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါ တယ်။
တကယ်တော့ ရေနွေးကြမ်း (၁) ခွက်မှာ ကဖီးဓာတ် ၂၅ ကနေ ၅၀ မီလီဂရမ်ပါဝင်လို့ ကော်ဖီထက် ကဖီးဓာတ် ပိုနည်းပါတယ် (ကော်ဖီ (၁) ခွက်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ၉၅ ကနေ ၂၀၀ မီလီဂရမ် ပါလေ့ရှိပါတယ်)။ ဆိုတော့ တစ်နေ့ (၄) ခွက်သတ်မှတ်ပါ။ ဒီပမာဏက ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေနိုင်တယ်။ ကဖီးဓာတ်ပါဝင်မှု အလွန်အကျွံ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး သံဓာတ်စုပ်ယူမှုလည်း ထိခိုက်စေလိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ Roussell က ဆိုပါတယ်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com) Credit: TrendMyanmar
← သခွါးရည်သောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကေျးဇူးများ
ယီမင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲပျက်ပြား၊ အစိုးရတပ်ဖွဲ့များက ထိုးစစ်သစ်ဆင်နွှဲ →
“သွေးလွန်တုတ်ကွေး ၂၄ နာရီအတွင်း ပျောက်သည့်နည်း.. “ ..!
May 19, 2017 USDP 2016 Comments Off on “သွေးလွန်တုတ်ကွေး ၂၄ နာရီအတွင်း ပျောက်သည့်နည်း.. “ ..!